Liechtenstein kaThixo Union Bank yi bank kuqala mvume hlabathi ukuba asungule cryptocurrency yayo
Liechtenstein i-Union Bank AG zokusungula cryptocurrency yabo, uphawu kokokuqala ebhankini mvume yaye kulawulwa. Ibhanki lowu umqondiso lwabo cryptocurrency iza kuphehlelelwa ulungelelwaniso kunye Authority Financial Market, igunya sokusebenza Liechtenstein. Le ngqekembe kuthiwa Coin Payment Union Bank kwaye iya esekelwa eyake lwemali. Ibhanki usebenzisana ezininzi abarhwebi cryptocurrency kunye ezicebisa ngekharityhulam ukuze kubonelelwe ukuguquka nokujika ukusuka cryptocurrency ukuya eyake currency.
Ibhanki yathi babeza kuba “-Inyathelo elinye crypto kunye nomboneleli blockchain.” Usihlalo weBhodi yabaLawuli, M.H. Dashmaltchi, wathi: "Injongo yethu kukuba sibe yebhanki yokuqala ehlabathini utyalo blockchain… njengebhanki onemvume ngokupheleleyo yaye kulawulwe wamnika ilungelo ukudibanisa zonke iingenelo zebhanki zemveli kunye amathuba obekwayo iteknoloji blockchain thina.
ukutshintshiselana Crypto ujoyine Winklevoss backed iqela self-elawulayo
Iqela kokutshintshiselana cryptocurrency ziye Washumayela kunye Gemini be Cameron kunye Tyler Winklevoss ukuba kusungula umbutho omtsha-regulatory kushishino ezijoliswe (SRO). I Commodity Association Virtual inenjongo “ikhuliswa sound ngokwezimali, iimarike zorhwebo virtual uxanduva ezintsha” ngokuyila imigangatho shishino nokukhuthaza ukutshintshiselana cryptocurrency ukuthintela ngokulungisa emarikeni kunye nezinye izenzo zenkohlakalo.
Gemini isungula iqela yokusebenza ukuqalisa ukuphuhlisa le migangatho. Yorhwebo Futures Trading Commission inegunya elisemthethweni phezu yorhwebo, ezifana Bitcoin, nakuba loo nto ukuba akukho ezinegunya lokugweba kwiimarike zemali kunye ibala zivela zorhwebo. VCA uchaza ” iimarike zemali zemveliso virtual, ungazuza .lulwaleko eyongezelelweyo yokongamela. Sikholelwa ukuba ngokongeza lo maleko uyakwazi ukunika ukhuseleko ngakumbi kubathengi kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kwezi marike kunye noshishino ekhulayo.” VCA uya kutyumba ibhodi yabalawuli lokongamela umbutho, nto leyo eya kwenza ukuba abaseleyo a non-nzuzo, iqela ezizimeleyo kungaba “ukunceda ukucwangcisa nokusebenzisa imigangatho yehlabathi kunye neendlela ezingcono.”
ibhanki chinese ikhupha $ 66M ezixabisa ngokhuselo blockchain
Zheshang Bank, enye ezentengiso inkulu ongengowabo iibhanki e China, sele kugqityiwe kunikezelo izibambiso ezixabisa $66 million bezimali ngokusebenzisa platform yayo blockchain lobunikazi. Ibhanki wafaka emibuzo neememo kwayo Shanghai Clearing House on Aug. 13 & waba ngomnye amaziko yokuqala kweli lizwe ukuba zibe lula imicimbi engekenziwa ukulungiselela eyenzwe liqela asethi nge blockchain.
inkundla, ebizwa Lianrong, Uyilelwe ku-indlu yibhanki kunye ngenjongo yokuvumela iinkampani ezibhaliselwe ukusasaza akhawunti asethi zabo ezifunyenwe izimali kwaye ukuba ngokubhekele ukulungisa imicimbi yale invoyisi njengoko izibambiso kwi peer-to-peer fashion. Ngokuthenga ezifunyanwayo akhawunti eqinile xa, umtyali-mali akuguquki ohlawulela-invoyisi le nkampani ukuba esixhomekeke isaphulelo kwaye ulindele ukuba makaqokelele isixa esipheleleyo kamva leliqela lowo unoxanduva lokwenza intlawulo yokuqala.
Ingxelo Daily Market Kraken for 20.08.2018
$78.4M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
The BREAKOUT CAME!! izolo ...
Hey Daily Team Altcoin, Beari...
Post Previous:Blockchain News 20.08.2018